Dawlada Dhexe oo Degaanka Somalida Ugu Xoolo Goynaysa 1.3b – Rasaasa News
Nov 13, 2011 Dawlada Dhexe oo Degaanka Somalida Ugu Xoolo Goynaysa 1.3b, ethiopia, sayid cabdi maxamuud cumar
Addis Ababa, November 13, 2011 [ras] – Madaxweynaha degaanka Somalida Ethiopia Sayid Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa maalinta Isniinta ah November 14, 2011 kula kulmi doona Raysal wasaaraha Ethiopia Mudane Meles Zenawi xafiiskiisa.
R/wasaare Meles Zinawi oo jecel in uu ka daba tikhaan tikhiyo degaanka Somalida degaanada kale ee Ethiopia oo aad uga horeeya dhinaca horumarka, ayaa ugu yaboohay lacag horumarineed oo dhan 1.3 bilyan. Lacagtaas oo lagu biirinayo miisaaniyadii uu hore u helay degaanka Somalida oo ahayd 3.2 bilyan.
Madaxweyne Sayid Cabdi Maxamuud Cumar ayey wehelin doonaan masuuliyiin ka mid golihiisa wasiirada, oo ah kuwa ay wasaaradahoodu furaha u yihiin horumarka degaanka Somalida sida; Beeraha, Caafimaadka, Biyaha, Waxbarashada, iyo Maaliyada.
R/wasaaraha ayaa si shakhsi ah u waydiin doona su,aalo masuuliyiintan baahida iyo mashaariicda ay u isticmaalayaan lacagta lasiinayo.
Dhinaca degaanka canfarta ayaa isagana loogu xoolo goynayaa 500 milyan, iyaga laftigoodu waxay ka qayb galayaan shirka ka dhacay xasiiska R/wasaaraha.
Lacagahan loogu xoolo goynayo degaanada Somalida iyo Canfarta, ayaan la cadaynin meelaha ay ka imanayaan maadaama dhawaan ay dawlada dhexe qaybisay sanad miisaaniyadeedkii dalka 2011/12.
R/wasaare Meles Zinawi ayaa si gaar ah ugu faraxsan isbadalka nabadgaliyada iyo horumarinta ee ka socda degaanka Somalida Ethiopia iyo masuuliyiinta gadhwadeenka u ah degaanka.